Su'aal aan wali iweydiiyo milkiileyaasha ganacsiga ee qaangaarka ah ayaa ah inay tahay inay sameeyaan ama aysan yeelin suuq-bixinta-gujintooda (PPC) iyo in kale. Maaha su’aal fudud ama maya. PPC waxay bixisaa fursad la yaab leh oo ay ku riixdo xayeysiisyada dhagaystayaasha hortooda raadinta, bulshada, iyo bogagga internetka oo aadan caadi ahaan ku gaari karin habab dabiici ah.
Ma inaad sameysaa PPC? Hagaag, waxaan kugula talin lahaa inaad yeelato aasaas maktabadda iyo website dhammaan dawannada iyo fooriyeyaasha kahor intaadan bilaabin inaad ku qarash gareyso lacag dhan xayeysiinta. Marka laga reebo, dabcan, waa haddii aadan hubin waxa ku jira waxyaabaha sida dhabta ah u soo saari doona beddelaad. Tijaabinta iskudhafka ereyada muhiimka ah iyo nuqulka xayeysiinta ee PPC waxay kuu badbaadin kartaa tan lacag iyo waqti aad ku bixisid suuq geynta waxyaabaha aadan hubin.
Tags: qiimaha riixactrsidee loo kala xayeysiiyaa ppcraadinta lacagta lehbixisay xayeysiinta bulshadaBixi halkii gujippcsuuqgeynta ppcserpwatch